သင်္ချာ ဥပဒေသလေး တစ်ခု – Gentleman Magazine
သင်္ချာ ဥပဒေသလေး တစ်ခု
11/12/2015 23/05/2017 Admin
သင့်ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံးပြည့်စေဖို့ သင်္ချာ ဥပဒေသလေး တစ်ခု
သင့် စိတ်ကြိုက် အလုပ် လုပ်ရဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို လိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ သင်္ချာ ဥပဒေသလေးဟာ သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လူတွေဟာ သူတို့နဲ့ သင့်တော်ရဲ့ အရာတွေနဲ့ပဲ တွဲထားပြီးသားပါ။ အဲဒိအချက်လေးကို သိရှိတာက သင်လိုချင်တာ ရနိုင်ဖို့ နည်းဗျူဟာပါပဲ။
ဥပမာ ပါတီ တစ်ခုမှာ ကောင်လေး သုံးယောက်က ကောင်မလေး သုံးယောက်ကို စကားပြောနေတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူနဲ့ သင့်တော်လဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။
၁၉၅၀ လောက်က ချစ်ရေးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဆိုရင် ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ခြင်းစီက အလှဆုံး မိန်းကလေးကို စတင် ချစ်ရေးဆိုမှာပါ။ မိန်းကလေးကလဲ ချစ်ရေးဆိုမှုတွေ အများအပြား ရရှိလာရင် သူမ အနှစ်သက်ဆုံး သူကို ရွေးမှာပါ။ အပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်လေးဟာလဲ ဒုတိယ သဘောအကျဆုံး မိန်းကလေးဆီ သွားဦးမှာပါ။
မိန်းကလေးတွေကတော့ မရွေးချယ်ပါဘူး။ သူတို့ကို လာပြီး ကမ်းလှမ်းတဲ့ အထဲက အကောင်းဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။ စပြီး ချစ်ရေးဆိုတဲ့ ယောက်ျားလေးကတော့ သူ့ စိတ်တိုင်းကျ အကောင်းဆုံးကို ရမှာပါ။
ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်နှယောက်ပဲ ရှိရှိ ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ မိန်းကလေးတွေကို ချစ်ရေးဆိုရင် ထွက်လာနိုင်မယ့် အခြေအနေ လေးမျိုး ရှိပါတယ်။
၁. အားလုံး အတွဲကိုယ်စီ ရသွားပါတယ်။
၂. အတွဲတွေကို ဆုံး ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ အတွဲကို သူတို့ မကျေနပ်ကြပါဘူး။
၃. ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ယောက်ျားတိုင်းဟာ သူတို့ သဘောကျဆုံး ကောင်မလေးတွေကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။
၄. ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းဟာ သူတို့ကို ချဉ်းကပ်လာသမျှရဲ့ သူတို့နဲ့ သဘောမကျ မဖြစ်ဆုံး ကောင်လေးကိုပဲ ရပါလိမ့်မယ်။
ပြောရရင် အရင် ချစ်ရေးဆိုနိုင်သူက ပိုကောင်းပါတယ်။ ထိုင်နေပြီးတော့ ချစ်ရေးဆိုလာမှာကို စောင့်နေသူကတော့ သူ့ကို ချစ်ရေးဆိုလာသမျှရဲ့ အကောင်းဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။
အဲဒိအချက်ကို ဝန်ထမ်းငှါးတဲ့ပုံစံနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်
ဝန်ထမ်းငှါးသူတစ်ယောက်က ကြော်ငြာတင်ပြီး အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ သူတွေကိုပဲ အဲဒိအထဲက အကောင်းဆုံးကို ရွေးပြီး အလုပ်ခန့်တာဟာ ချစ်ရေးဆိုလာမှာ လာစောင့်တဲ့ မိန်းကလေးလိုပါပဲ။ လာလျှောက်သူတွေထဲက အကောင်းဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။
ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းပြီး ပညာရှင်တွေ လိုက်ရှာတဲ့ သူကတော့ ချစ်ရေးဆိုတဲ့ ကောင်လေးလိုပါပဲ။ အားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးကို ကမ်းလှမ်းခွင့် ရှိပါတယ်။
ဝန်ထမ်းဘက်က စဉ်းစားရင်လဲ အိမ်မှာထိုင်နေရင် လာပြီး ကမ်းလှမ်းတဲ့ အလုပ်ကိုပဲ လက်ခံရမှာပါ။ အပြင်ထွက်ပြီး က်ုယ်တိုင်လိုက်ရှာမှ စိတ်ကြိုက် ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ရမှာပါ။
အဲဒါကြောင့် ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အရင် လက်ဦးတဲ့ သူက သာပါတယ်။ အရင် ရှာဖွေတဲ့သူ ဖြစ်အောင် နေပါ။ အရှာဖွေ မခံပါနဲ့။
သငျ့ဘဝ ရညျမှနျးခကျြတှေ အားလုံးပွညျ့စဖေို့ သင်ျခြာ ဥပဒသေလေး တဈခု
သငျ့ စိတျကွိုကျ အလုပျ လုပျရဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကောငျမလေးတဈယောကျကို လိုကျဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီ သင်ျခြာ ဥပဒသေလေးဟာ သငျ့ကို ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
လူတှဟော သူတို့နဲ့ သငျ့တျောရဲ့ အရာတှနေဲ့ပဲ တှဲထားပွီးသားပါ။ အဲဒိအခကျြလေးကို သိရှိတာက သငျလိုခငျြတာ ရနိုငျဖို့ နညျးဗြူဟာပါပဲ။
ဥပမာ ပါတီ တဈခုမှာ ကောငျလေး သုံးယောကျက ကောငျမလေး သုံးယောကျကို စကားပွောနတောကို စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သူတို့ တဈယောကျခငျြးစီမှာ ဘယျသူက ဘယျသူနဲ့ သငျ့တျောလဲဆိုတာ သတျမှတျထားပွီးသားပါ။
၁၉၅၀ လောကျက ခဈြရေးဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုး ဆိုရငျ ယောကျြားလေး တဈယောကျခွငျးစီက အလှဆုံး မိနျးကလေးကို စတငျ ခဈြရေးဆိုမှာပါ။ မိနျးကလေးကလဲ ခဈြရေးဆိုမှုတှေ အမြားအပွား ရရှိလာရငျ သူမ အနှဈသကျဆုံး သူကို ရှေးမှာပါ။ အပယျခံလိုကျရတဲ့ ကောငျလေးဟာလဲ ဒုတိယ သဘောအကဆြုံး မိနျးကလေးဆီ သှားဦးမှာပါ။
မိနျးကလေးတှကေတော့ မရှေးခယျြပါဘူး။ သူတို့ကို လာပွီး ကမျးလှမျးတဲ့ အထဲက အကောငျးဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။ စပွီး ခဈြရေးဆိုတဲ့ ယောကျြားလေးကတော့ သူ့ စိတျတိုငျးကြ အကောငျးဆုံးကို ရမှာပါ။
ယောကျြားလေးတှေ မိနျးကလေးတှေ ဘယျနှယောကျပဲ ရှိရှိ ဒီပုံစံအတိုငျးပဲ မိနျးကလေးတှကေို ခဈြရေးဆိုရငျ ထှကျလာနိုငျမယျ့ အခွအေနေ လေးမြိုး ရှိပါတယျ။
၁. အားလုံး အတှဲကိုယျစီ ရသှားပါတယျ။
၂. အတှဲတှကေို ဆုံး ဖွတျပွီးတာနဲ့ ယောကျြားလေးတှနေဲ့ မိနျးကလေးတှဟော သူတို့ အတှဲကို သူတို့ မကနြေပျကွပါဘူး။
၃. ဆုံးဖွတျပွီးတာနဲ့ ယောကျြားတိုငျးဟာ သူတို့ သဘောကဆြုံး ကောငျမလေးတှကေို ရရှိပါလိမျ့မယျ။
၄. ဆုံးဖွတျပွီးတာနဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးဟာ သူတို့ကို ခဉျြးကပျလာသမြှရဲ့ သူတို့နဲ့ သဘောမကြ မဖွဈဆုံး ကောငျလေးကိုပဲ ရပါလိမျ့မယျ။
ပွောရရငျ အရငျ ခဈြရေးဆိုနိုငျသူက ပိုကောငျးပါတယျ။ ထိုငျနပွေီးတော့ ခဈြရေးဆိုလာမှာကို စောငျ့နသေူကတော့ သူ့ကို ခဈြရေးဆိုလာသမြှရဲ့ အကောငျးဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။
အဲဒိအခကျြကို ဝနျထမျးငှါးတဲ့ပုံစံနဲ့ စဉျးစားကွညျ့ကွရအောငျ
ဝနျထမျးငှါးသူတဈယောကျက ကွျောငွာတငျပွီး အလုပျလာလြှောကျတဲ့ သူတှကေိုပဲ အဲဒိအထဲက အကောငျးဆုံးကို ရှေးပွီး အလုပျခနျ့တာဟာ ခဈြရေးဆိုလာမှာ လာစောငျ့တဲ့ မိနျးကလေးလိုပါပဲ။ လာလြှောကျသူတှထေဲက အကောငျးဆုံးကိုပဲ ရမှာပါ။
ကိုယျတိုငျ ကှငျးဆငျးပွီး ပညာရှငျတှေ လိုကျရှာတဲ့ သူကတော့ ခဈြရေးဆိုတဲ့ ကောငျလေးလိုပါပဲ။ အားလုံးထဲက အကောငျးဆုံးကို ကမျးလှမျးခှငျ့ ရှိပါတယျ။
ဝနျထမျးဘကျက စဉျးစားရငျလဲ အိမျမှာထိုငျနရေငျ လာပွီး ကမျးလှမျးတဲ့ အလုပျကိုပဲ လကျခံရမှာပါ။ အပွငျထှကျပွီး ကျုယျတိုငျလိုကျရှာမှ စိတျကွိုကျ ကုမ်ပဏီမှာ လုပျရမှာပါ။
အဲဒါကွောငျ့ ဘယျကိစ်စမှာမဆို အရငျ လကျဦးတဲ့ သူက သာပါတယျ။ အရငျ ရှာဖှတေဲ့သူ ဖွဈအောငျ နပေါ။ အရှာဖှေ မခံပါနဲ့။
Previous: Maslow ရဲ့ လူသားလိုအင် ပိရမစ်
Next: မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက အောင်မြင်မှုအပေါ် ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနိုင်သလဲ ?